Moe Kai: မွေးနေ. လက်ဆောင်
ipad က အရင်ကတော့ iphone နဲ. Macbook နဲ. ကြားမှာ မလိုဘူးလို. ထင်ပေမယ့် ရလာတော့ လျှောက်ဆော့ကြည့်တော့မှ သူ.ရဲ. အသုံးတဲ့ပုံလေးတွေ တွေ.လာရပါတယ်။ ဥပမာ .. စာသင်ရမယ် ဆိုရင်၊ Presentation တွေ လုပ်မယ်ဆိုရင် power point presentation (Keynote) တွေကို အလွယ် တကူ ပြင်ဆင်လို. ရသလို၊ ကိုယ်က အသင်ခံတဲ့ စာတွေနဲ. အစည်းအဝေးတွေ မှာ အလွယ် တကူ မှတ်စုလိုက်လို.ရပါသေးတယ်။ အရင်က တွေ.ရာ စက္ကူ မှတ်စု စာအုပ်တွေနဲ. ဗြုတ်စ ဗြင်းတောင်း မှတ်စု လိုက်ပြီး ဘယ်တော့ မှ ပြန်မဖတ်ဖြစ်တဲ့ ခောတ် ကို ကျော်ပြီထင်ပါတရဲ.နော်။ ဆေးစာ ဖတ်စာ စာအုပ်နဲ. ဂျာနယ်တွေကိုလဲ ipad ထဲ ကူးထားလုိုက်တော့ အလွယ်တကူ ရောက်ရာ အရပ်မှာ ဖတ်လို.ရတာပေါနော်။ အရင်လုို စာအုပ် အလေးကြီးတွေ သယ်စရာ မလိုတော့ဘူးပေါ့။
ပြောရရင်တော့ အများကြီးပါပဲ။ တခုပဲ လုိုအပ်တာက မြန်မာ Font ထဲ့ လုို.မရတာပါပဲ။ မြန်မာ ဘလော့ဂ် ကို ဖတ်ဖုို. Apps တွေ ရှိပေမယ့်၊ မြန်မာလို type လုပ်ဖုို.ကတော့ တော်တော် ခက်ပါတယ်။ မြန်မာလို ဘလော့ဂ် ရေးဖုို. ဆိုတာကတော့ လုံးဝ မဖြစ်နိုင်သေးဘူးလို. ပြောရမလုိုပါပဲ။ မြန်မာဂုရု ကြီးတွေ ဆီမှ app အသစ်ရေးနိုင်မှ၊ ဒါမှမဟုတ် Apple က တခြား Font တွေကို ထဲ့ ဖို. ခွင့်ပြုတဲ့ နေ.၊ မြန်မာ Font ထဲ့ ပေးတဲ့ နေ. ရောက်ရင်တော့ iPad လေးဟာ ကျမအတွက် Perfect gadget လေးတခု ဖြစ်လာနိုင်မယ် ထင်ပါရဲ.။